वामदेवसँग प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारमा डिनर मिटिङ - Meronews
वामदेवसँग प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारमा डिनर मिटिङ
मेरोन्यूज २०७८ वैशाख ९ गते २२:५२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेता वामदेव गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर डिनर मिटिङ गरेका छन् । नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षसँग कुरा मिल्न नसकेर दिग्दारीमा रहेका ओली वामदेव गौतम फकाउने प्रयासमा छन् ।
गौतमसँग हिजो मात्रै माधव नेपाल र झलनाथ खनालले गौतमको छोराको नागपोखरी स्थित कार्यालयमै पुगेर आफुहरुलाई साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै नेपालसँगको लगातार दुई दिनको सम्वाद मिलापमा परिणत हुने छाटकाट नदेखेपछि गौतमलाई ओलीले बालुवाटार बोलाएर डिनर मिटिङ गरेका हुन् ।
पार्टी महाधिवशेन आयोजक समितिको भोलि शुक्रवार वैठक बोलाइएको छ । नेपालले उक्त बैठक रोक्न र २०७५ जेठ २ को केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन ओलीसँग माग गरिरहेका बेला ओलीले गौतमसँग अर्थपूर्ण डिनर मिटिङ गरेका हुन् ।
यो डिनर मिटिङमा ओलीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भटटराईलाई पनि साथमै राखेका छन् । त्यस्तै कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ पनि सागै डिनरमा सहभागी थिए ।
दुइ नेताको बीचमा डिनर मिटिङ भएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समाजिक सञ्जालमा तस्बीर समेत सार्वजनिक गरेर जानकारी दिएका छन् ।
केही वेर भटटराई र श्रेष्ठ रहेपनि त्यसपछि भने गौतम र ओलीका वीचमा एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि दुवै नेताले सँगै खाना पनि खाएका थिए । ओली केही दिन यता पार्टी भित्रका असन्तुष्ट नेताहरुसँग निरन्तर सम्वादमा वसिरहेका छन् । हजिो र आज उनले नेता माधव नेपालसँग मोरियट होटलमा वार्ता गरेका थिए । गौतम पनि ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि रुष्ट वनेका थिए । यद्यपी उनी नेपाल खनाल पक्षमा पनि खुलेका थिएनन ।
प्रमुख सचेतक भटटराईले वामदेव गौतमसँग सहमति लिएरै तस्विर सार्वजनिक गरेको पनि सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन् ।
कमरेड बामदेब गौतमलाइ मैले सपाट सोधें -तपाइहरु बीचको सम्बाद सकारात्मक -नकारात्मक जे जस्तो भए पनि तश्वीर सार्वजनिक गर्छु है कमरेड ? ”
विशालले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्,- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास वालुवाटारमा प्रमसँगको सम्बादपछि उहाँले (बामदेव) भन्नुभो ”केपी ओलि देशको प्रधानमन्त्री हो, नेकपा(एमाले) को अध्यक्ष हो तर उहाँसङको मेरो सम्बन्ध पदका कारणले बनेको हैन जमानादेखिको हो र अटुट रहिरहनेछ ।”
अब कमरेड बामदेब गौतमले के गर्नुहोला भन्ने आम जिज्ञासाको जवाफ यसैमा खोज्ने त होला नि !
हेर्नुहोस डिनर को थप तस्विर विशाल भटटराईको सामाजिक सन्जालवाट :